Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulls out of the June 27 run-off presidential election after President R
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulls out of the June 27 run-off presidential election after President Robert Mugabe's supporters attacked his rally.
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulled out of a run-off election against President Robert Mugabe on Sunday, saying his supporters would be risking their lives if they voted.
Zimbabwe Electoral Crisis Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulls out of the June 27 run-off presidential election after President Robert Mugabe's supporters attacked his rally.
Zimbabwe Electoral Crisis: Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulls out of the June 27 run-off presidential election after President Robert Mugabe's supporters attacked his rally.
2013-07-5 (Context: Morgan Tsvangirai, Robert Mugabe, Zimbabwe)
2013-06-13 (Context: Morgan Tsvangirai, Robert Mugabe, Zimbabwe)
2010-10-7 (Context: Morgan Tsvangirai, Robert Mugabe, Zimbabwe)
2010-05-6 (Context: Morgan Tsvangirai, Robert Mugabe, Zimbabwe)
Movement for Democratic Change President Morgan Tsvangirai agrees to become Zimbabwe's Prime Minister on February 11 in a deal with President Robert Mugabe.
2009-01-31 (Context: Morgan Tsvangirai, Robert Mugabe, Zimbabwe)